जोर्डनमा घरेलु महिला कामदार पठाउन बाटो खुला, साउदी, कुवेत, दुवई भन्दा राम्रो छ तलव ! बिमा १० हजार अमेरिकी डलर हुने ! « Light Nepal
जोर्डनमा घरेलु महिला कामदार पठाउन बाटो खुला, साउदी, कुवेत, दुवई भन्दा राम्रो छ तलव ! बिमा १० हजार अमेरिकी डलर हुने !
Published On : 8 March, 2018 12:56 am
काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार कार्यालयलाई जोर्डनमा ३ सय महिला घरेलु कामदार (हाउसमेड) पठाउन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने बाटो खुलेको छ । संस्थागत रूपमा जोर्डनमा पहिलो पटक हाउसमेड पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । कान्तिपुरमा खबर छ ।